UXiaomi utyhila indlela aqhube kakuhle ngayo kwikota yokuqala ye-2019 kwingxelo yakhe yezemali | I-Androidsis
UXiaomi uyaqhubeka nokwenza kakuhle kwintengiso ye-smartphone, kwaye ngeli xesha uyibonisa ngengxelo yezemali yekota yokuqala yalo nyaka, apho inika ingxelo yokukhula komvuzo omiselweyo we-22,4% ngonyaka-ngonyaka wokuqokelela ngaphezulu kwe-2,600 yezigidigidi ze-yuan. 330 yezigidi zeerandi), xa kuthelekiswa ne-2.100 yezigidigidi ze-yuan (malunga ne-272 yezigidi ze-euro) eyayizuze kunyaka ophelileyo.
Uye waxela lonto ingeniso yayo iyonke inyuke nge-27.2% ukuya kwi-43.8 yezigidigidi ze-yuan (malunga ne-5,712 yezigidi ze-euro). Owona mthombo mkhulu wemali engenayo kwinkampani iyaqhubeka nokuba yishishini le-smartphone. Iinkcukacha ezithe kratya zengxelo engezantsi ...
I-Xiaomi ngoku ilawula intengiso ye-smartphone e-India kwaye iqhuba kakuhle kwamanye amazwe angaphandle kwintengiso yayo yase China nayo. Iimarike zamanye amazwe zenze ngaphezulu kwe-38% yengeniso yayo iyonke kwikota yokuqala, emele ukwanda okungama-35% kweli candelo. Ukutyhala kukaXiaomi phesheya kweza phakathi kokudodobala kwehlabathi kwicandelo, okumangalisayo.
Ngokwengxelo yeCanalys, UXiaomi wayengowesine ngobukhulu emhlabeni wenza umenzi weefowuni ngeeyunithi ezithunyelwe kwikota yokuqala. Ukongeza, iyunithi yenkampani 'ye-IoT kunye nendlela yokuphila', enoluhlu olubanzi lwezixhobo zasekhaya, inyuse isabelo sayo sengeniso ukusuka kwi-22,4% ukuya kwi-27,5% ngaphezulu konyaka. Inkampani ithi ukukhula kweli candelo bekuqhutywa ikakhulu kukuthengiswa kweTV, indawo entsha ekugxilwe kuyo kwinkampani.
NgoJanuwari UXiaomi ubhengeze i-0,48% yesiteki kumenzi weTV iTCL. Oku kuqinisa umanyano olukhoyo phantsi kwenkqubo yokusebenza kweXiaomi eyayidityaniswe kwiimveliso ze-TCL.
Kude kube sekupheleni kuka-Matshi, inkampani ibike ukuba kunjalo inoxanduva lwezigidi ezingama-261 zabasebenzisi abasebenzayo ngenyanga nge-MIUI OS yayo efakwe kuzo zonke izixhobo, emele ukukhula konyaka nonyaka ngama-37,3%. Inani lezixhobo ze-IoT, ngaphandle kwee-smartphones kunye neelaptops, lenyuke nge-70%, ukufikelela kwiiyunithi ezizigidi ezili-171.0.
UXiaomi usebenza nzima ekonyusa isoftware yakhe ye-Intanethi kunye neenkonzo, kodwa ukuza kuthi ga ngoku iqhinga alikhange lisebenze, kubalwa i-9.7% yemali iyonke yenkampani, xa kuthelekiswa ne-9.1% kunyaka ophelileyo. Inkampani ithe ayizukufumana ngaphezulu kwe-5% yenzuzo kwishishini lehardware, Iyavakala ke into yokuba uXiaomi agxile ngakumbi kwisoftware nakwiinkonzo ze-intanethi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » UXiaomi utyhila indlela aqhube kakuhle ngayo kwikota yokuqala ye-2019 kwingxelo yakhe yezemali
Uhlalutyo lwe-Ezviz CTQ3W, ikhamera yokujonga i-wifi